Doorashadii Koonfur galbeed oo markii sadexaad dib loo dhigay • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Koonfur Galbeed / Doorashadii Koonfur galbeed oo markii sadexaad dib loo dhigay
Doorashadii Koonfur galbeed oo markii sadexaad dib loo dhigay
Guddiga qaban qaabada doorashada Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa shir jiraa’id oo ay goordhawayd ku qabteen magaaada Baydhabo waxa ay markale ku shaaciyeen in dib loo dhigay doorashadii Madaxweynaha Koonfur Galbeed.
Gudiga ayaa sheegay in wada tashi iyo qiimeyn kadib ay go’aansadeen in dib loo dhigo doorashada duruufo jira awgood sida in helo qalabkii ay ku shaqeyn lahaayeen gudiga iyo dhaqaalihii loogu talagalay doorashada oo aan wali lahaqab tirin.
Waxa ay kaloo sababaha ay dib ugu dhigeen doorashada madaxweynaha Koonfur galbeed ku sheegeen in magaalada Baydhabo aanay wali gaarin wufuudii heerka caalami ee kor joogtada ka noqon lahayd doorashada.
Ugu dambeyn gudiga ayaa waxa ay go’aamiyeen in doorashada la qabto 19-ka bishan December ee ay maanta kow tahay inta ka horeysana laga shaqeynayo sidii loo dhameystiri lahaa waxyabaaha lagama maarmaan ka u ah qabsoomida doorashada madaxweyne ee maamulka Koonfur galbeed.
Si kastaba ha ahaatee waa markii sadexaad oo ay dib u dhacdo doorashada madaxweynaha Koonfur galbeed lamana oga in ay kasii dib dhici karto wakhtiga haatan loo cayimay qabashadeeda.